१४ असोज, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको इजाजतपत्र, स्तर कायम, जाँचपास र प्रदूषण परीक्षण प्रस्थान वा गन्तव्यमा रहेको विभागअन्तर्गतको कार्यालयबाट गराउन अनुरोध गरेको छ । विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यात्रुवाहक वा मालवाहक सवारी साधनलाई विभागअन्तर्गतको कार्यालयमा परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
प्रस्थान, गन्तव्य वा बाटामा सङ्घीय विभागअन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालय नहुँदा सवारीधनीले प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षण गर्न सक्ने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असार २९ को निर्णयानुसार साउन १ देखि सो नियम लागू गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यससम्बन्धी पत्राचार भइसकेको छ । सवारीसाधनका सबै किसिमका परीक्षण नभएको पाइएमा विभाग र ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार कारवाही हुने उल्लेख छ ।
चोरको आँखा पल्सरमा : काठमाडौंमा दैनिक ४–५ वटा मोटरसाइकल चोरी !
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा, प्रति सेयर मूल्य १४०
खाना खाने अनेक शैली : संस्कृतिबाट निर्देशित कि खानाको प्रकृतिबाट ?
२७ अंकले बढ्यो सेयर बजार, ७ अर्ब बढीको कारोबार
प्रधानमन्त्रीले पाएनन् विश्वासको मत : पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत